Nafana tahaka ny toetr’andro teto Toliara ny fiarahantsika. Mahafinaritra ahy hatrany ny mihaona aminareo. Tsy ho ambakan’ny faritra hafa ianareo vahoaka eto ny amin’ny fampandrosoana izay ho entiko. Efa nilaza taminareo aho fa mila tanora vonona, sahy, mavitrika sy mahavita azy ny hitantana an’i Madagasikara.
ISIKA REHETRA TSY MAINTSY MANDRESY